DA-7 A3-Standard gadziriso 1.Constant Height Head Ends: Yakagadziriswa musoro wedenga magumo inogonesa kukurumidza uye nyore kuwana kumusoro wemurwere, mutsipa uye thorax. 2.Split Side njanji: Iyo 4pcs PP njanji njanji inopa murwere dziviriro kubva kunaya. 3.Removable Mattress Platform: Iyo Matress platform ndeye phenolic resin mabhodhi ayo anogona kuve nyore kubviswa uye nyore kune sterilization. Iyo mattress yepuratifomu inogona kuita X-ray yekudzokera bhodhi uye kupa murwere kunyatsogadzikana. 4.Central Mukoti Kudzora S ...